ယူရေးနပ်စ်ဂြိုဟ် - ဝီကီပီးဒီးယား
(ယူရေနတ်ဂြိုဟ် မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)
၁၉၈၆ ဗွိုင်ယေဂျာ ၂ မှ
၁၃ မတ် ၁၇၈၁
/ˈjʊərənəs/ ( နားဆင်) or /jʊˈreɪnəs/ ( နားဆင်)
ပတ်လမ်း ဂုဏ်အင်များ[မှတ်စု ၁]
6.48° နေ၏ အီကွေတာသို့
7007253620000000000♠25,362±7 km[မှတ်စု ၂]
4.007 Earths[မှတ်စု ၂]
3.929 Earths[မှတ်စု ၂]
7015811560000000000♠8.1156×109 km2[မှတ်စု ၂]
7022683300000000000♠6.833×1013 km3[မှတ်စု ၂]
7003127000000000000♠1.27 g/cm3[မှတ်စု ၂]
7000869000000000000♠8.69 m/s2[မှတ်စု ၂]
21.3 km/s[မှတ်စု ၂]
17° 9′ 15″
၇၆ ကယ်လ်ဗင် (−၁၉၇.၂ ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ်)
83 ± 3% ဟိုက်ဒရိုဂျင် (H2)
15 ± 3% ဟီလီယမ် (He)
2.3% မီသိန်း (CH4)
0.009% (0.007–0.015%) ဟိုက်ဒရိုဂျင် ဂျူတာရိုဒ် (HD)
ယူရေးနပ်စ် (အင်္ဂလိပ်: Uranus)သည် နေအဖွဲ့အစည်းအတွင်းတွင် နေမှစ၍ ၇ ခုမြောက် ဂြိုဟ်ဖြစ်သည်။ ယူရေးနပ်စ်သည် ဧရာမဓာတ်ငွေ့အစိုင်အခဲ(gas giant) ကြီးတစ်ခုဖြစ်ပြီး နေအဖွဲ့အစည်းအတွင်းတွင် တတိယမြောက်အကြီးဆုံးဂြိုဟ်ဖြစ်သည်။ ယူရေးနပ်စ်သည် ရေခဲများ၊ ဓာတ်ငွေ့များ နှင့် သံရည်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။ လေထုထဲတွင် ဟိုက်ဒရိုဂျင်၊ ဟီလီယမ်နှင့် မီသိန်းဓာတ်ငွေ့တို့ပါဝင်သည်။ ယူရေးနပ်စ်ဂြိုဟ်ပေါ်ရှိ အပူချိန်မှာ အနှုတ် ၁၉၇ ဒီဂရီ ဆဲလ်စီးယပ် သို့ ၇၉ ကယ်လ်ဗင် ဖြစ်သည်။ ဂြိုဟ်ရံလပေါင်း ၂၇ စင်း ရှိပြီး အကြီးဆုံးလ ၅ စင်းမှာ မီရန်ဒါ(Miranda)၊ အေရီယယ်(Ariel)၊ အမ်ဘရီယယ်(Umbriel)၊ တိုက်တေးနီးယား(Titania) နှင့် အော်ဘီယွန် (Oberon) တို့ဖြစ်သည်။ ယူရေးနပ်စ်ဂြိုဟ်သည် သူ၏ ဝင်ရိုးပေါ်တွင် အလွန်ပင်တိမ်းစောင်းနေသဖြင့် ဒေါင်လိုက်လည်ပတ်နေသည့်ပမာပင် ဖြစ်သည်။ ယူရေးနပ်စ်သည် နေကိုတစ်ပတ်ပတ်နိုင်ရန်အတွက် ကမ္ဘာ၏နှစ်နှင့်တွက်လျှင် ၈၄ နှစ်မျှကြာပြီး ဝင်ရိုးပေါ်တွင် တစ်ပတ်ပတ်ရန် ၁၇ နာရီ ၁၄ မိနစ်မျှသာ ကြာသည်။ ထို့ကြောင့် ယူရေးနပ်စ်ဂြိုဟ်၏ တစ်နှစ်တွင် ၄၂၀၀၀ ရက်မျှရှိသည်ဟု တွက်ချက်ရနိုင်သည်။ ယူရေးနပ်စ်ဂြိုဟ်နှင့် နက်ပကျွန်းဂြိုဟ်တို့ကြားရှိ အကွာအဝေးမှာ ၁.၆ ဘီလီယံ ကီလိုမီတာဖြစ်သည်။ ယူရေးနပ်စ်ဂြိုဟ်ကို ၁၇၈၁ ခုနှစ်တွင် ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ယူရေးနပ်စ်ဂြိုဟ်တွင် ခါးပတ် (ring) ပေါင်း ၁၁ ခုရှိသော်လည်း ကမ္ဘာမှမြင်နိုင်ရန် ခဲယဉ်းသည်။
ယူရေးနပ်စ်သည် ကျွန်ုပ်တို့ နေစကြဝဠာအတွင်းရှိ ဂြိုဟ်တစ်လုံး ဖြစ်သည်။ နေမှစ၍ အစဉ် လိုက်ရေတွက်လျှင် ထိုဂြိုဟ်သည် ခုနစ်ခုမြောက်ဂြိုဟ်ဖြစ်သည်။ ထိုဂြိုဟ်ကို ဂျာမန်-အင်္ဂလိပ် သွေးစပ်သည့် ဝီလီယံ ဟာရှယ်ဆိုသူ ထင်ရှားသော နက္ခတ္တဗေဒ ပညာရှင်တစ်ဦးက စတင်တွေ့ရှိခဲ့လေသည်။ ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသည် သူ၏ နက္ခတ်ကြည့် ကရိယာများကို မကျေနပ်သဖြင့် တစ်ကြိမ်ထက်တစ်ကြိမ် ပို၍ ကြီးမား အားကောင်းသော နက္ခတ်ကြည့်မှန်ပြောင်းများကို ပြုလုပ်ခဲ့လေသည်။ ထိုသို့ အကြိမ်ကြိမ် ပြုလုပ်လာခဲ့ရာ ထိုခေတ်ရှိ အဝေးကြည့်မှန်ပြောင်းများအနက် အကောင်းဆုံးကို ပြုလုပ်ပြီးသော ၁၇၈၁ ခုနှစ် မတ်လ ၁၃ ရက်နေ့တွင် ယူရေးနပ်စ်ကို ပထမဆုံး စတင်တွေ့ ခဲ့သည်။ စ၍ တွေ့စဉ်က ထိုဂြိုဟ်ကို ကြယ်တံခွန်တစ်ခုမျှ သာဖြစ်သည်ဟု ထင်မှတ်ခဲ့လေသည်။
ယူရေးနပ်စ်ဂြိုဟ်အား ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သူ ဝီလျံဟာရှယ်
ထိုနောက် ညဉ့်တိုင်းဆက်၍ ထိုကြယ်တံခွန်ဟု ထင်ရသည့် အရာကို ကြည့်သောအခါတွင် ထိုအရာသည် ကြယ်များအကြား၌ နေရာရွှေ့လျက်ရှိသည်ကို တွေ့ခဲ့လေသည်။ ထိုသို့ မြင်ရ သည့်တိုင်အောင် သူမြင်ရသည့် အရာသည် ဂြိုဟ်တစ်လုံး ဖြစ်လိမ့်မည်ဟု မထင်မိခဲ့ချေ။ ထိုသို့ မထင်မိခဲ့သဖြင့် သူ့အား အပြစ် မတင်ထိုက်ပေ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ထိုအခါက အဝေးကြည့်မှန်ပြောင်းများကို တီထွင်လာနိုင်ကြသည်မှာ နှစ်ပေါင်း တစ်ရာငါးဆယ်ကျော်လာပြီဖြစ်၍ ထိုအဝေးကြည့် မှန်ပြောင်းများဖြင့် ကောင်းကင်ပြင်ကို ရှာဖွေခဲ့ကြရာ ဂြိုဟ် အတော်များများကို တွေ့ရှိထားပြီးဖြစ်သောကြောင့် ဖြစ်ပေသည်။ ထိုကြောင့် သူသည် ကြယ်တံခွန်တစ်ခုကို တွေ့ရှိထားသည့်အကြောင်း ရေးသားကာ ထုတ်ဝေလိုက်လေသည်။
ဥရောပတိုက်ရှိ အဓိက နက္ခတ်မျှော်စင်ကြီးများမှ ထိုကြယ်တံခွန်ဟု ထင်ရသောအရာကို ဂရုတစိုက်နှင့်ကြည့်ကြရာတွင် ကြယ်တံခွန်တစ်ခုက ပြုမူထိုက်သည်တို့ကို မပြုမူဘဲနေသည်ကို တွေ့ခဲ့ကြလေသည်။ ထိုနောက် နေ့စဉ်ရက်ဆက် ဇွဲဖြင့် ကြည့်ရှုသောအခါတွင် ထိုကြယ်တံခွန်ဟု ထင်ရသော အရာသည် လမ်းတစ်ခုတွင် သွားလျက်ရှိသည်ကို တွေ့ခဲ့ကြလေသည်။ ထိုကြောင့် ဟာရှယ်အား ထိုဂြိုဟ်ကို စတင်၍ တွေ့ရှိသူဖြစ်သည်ဟု ဆိုကြလေသည်။ ထိုအခါ ဟာရှယ်က ပထမတွင် သူ့အား စောင့်ရှောက်ထားသည့် အင်္ဂလန်ပြည့်ရှင် ဘုရင်ကို အမွှမ်းတင်လိုသဖြင့် သူတွေ့ရှိခဲ့သည့် ထိုဂြိုဟ်ကို ဂျော်ဂျီ ယန်ဆိဒပ်ဟု အမည်ပေးလိုက်လေသည်။ ထိုအမည်ကို နက္ခတ္တဗေဒ ပညာရှင်များက သဘောမကျကြချေ။ ထိုကြောင့် နာမည်အမျိုးမျိုးကို ပေးခဲ့ကြရာ နောက်ဆုံးတွင် ဂျာမန်လူမျိုး နက္ခတ္တဗေဒ ပညာရှင်တစ်ဦးက ယူရေးနပ်စ်ဟူသော အမည်ကို အကြံပေး လိုက်လေသည်။ ထိုသို့ အကြံပေးရာတွင် ရှေးယခင်ဂြိုဟ်များအား အမည်ပေးရာတွင် အသုံးပြုသည့်နည်းကို အသုံးပြုထားသဖြင့် နက္ခတ္တေဒေ ပညာရှင်များက သဘောတူ လက်ခံလိုက်ကြလေသည်။ ရှေးပညာရှင်များကမူ အထူးသဖြင့် ဂရိလူမျိုးတို့က ယူရေးနပ်စ်မှာ ရှေးအကျဆုံးနတ်ဖြစ်သည်ဟု ယူဆခဲ့ကြသည်။ ထိုအမည်အရ ကောင်းကင်ပြင်ဟု အဓိပ္ပာယ်ရနေလေသည်။ ဂရိလူမျိုးတို့၏ ယုံကြည်ချက်အရ ထိုနတ်ကြီးက ကမ္ဘာမြေကြီးသို့ အပူ၊ အလင်းနှင့် မိုးများကို ပေးခဲ့သည်။ ယူရေးနပ်စ်သည် ဂျီယာအမည်ရှိသော ကမ္ဘာမြေကြီး နတ်သမီး၏ လင်ယောကျာ်း ဖြစ်သည်။ သူသည် ဆိုင်းကလုပ်၊ တိုင်တန်နှင့် ရီးအ ဆိုသည့် လက်ပေါင်းတစ်ရာစီရှိသော ဘီလူးတို့၏ ဖခင်ဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးတွင် သူ၏ သားအငယ်ဆုံး ဆက်တန် (စနေဂြိုဟ်) က သူ၏ နန်းကို သိမ်းပိုက်ကာ သူ့အား သတ်ပစ်လိုက်သည်။ ဖျူရီးခေါ် ဒေါသတရားသည် ယူရေးနပ်စ်၏ သွေးမှ ဖြစ်ပေါ် လာခဲ့သည်။
ယူရေးနပ်ဂြိုဟ်နှင့် ကမ္ဘာဂြိုဟ်အား နှိုင်းယှဉ်ပြထားပုံ
ထိုဂြိုဟ်၏ လမ်းကြောင်း နက္ခတ္တဗေဒပညာရှင်များက ပြည့်စုံစွာ တွက်ချက်ပြီးသောအခါတွင် ထိုယူရေးနပ်ဂြိုဟ်ကို ယခင်ကလည်း အကြိမ်ကြိမ် တွေ့ခဲ့ကြဘူးကြောင်း သိလာကြလေသည်။ သို့သော် ထိုစဉ်က ထို ဂြိုဟ်ကို တည်မြဲကြယ် တစ်လုံးမျှသာ ဖြစ်သည်ဟု ယူဆခဲ့ကြလေသည်။ ယူရေးနပ်စ်ဂြိုဟ်သည် နေနှင့်မိုင်ပေါင်း ၁၇၈၂ဝဝဝဝဝဝ မျှ ဝေးကွာပြီးလျှင် ကိုယ်ပိုင်ဝင်ရိုးပေါ်၌ ၁ဝ နာရီနှင့် မိနစ် ၅ဝ မျှအကြာတွင် တစ်ပတ်ပြည့်အောင် လည်လျက်ရှိလေသည်။ ထိုပြင် နေကို ပတ်သွား ရာတွင်တစ်ပတ်ပတ်မိစေရန် ၈၄ နှစ် နှင့် ၈ ရက်ကြာလေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ နေထိုင်လျက်ရှိသော ကမ္ဘာသည် ယူရေးနပ်စ်နှင့် နေ၏အကြားသို့ ၃၆၉ ရက်နှင့် ၉ နာရီ အကြာတွင် တစ်ကြိမ်ရောက်ရှိသွားလေသည်။ ယူရေး နပ်ဂြိုဟ်၏ လမ်းတွင် ထူခြားချက်ကို တွေ့ရှိကြရာမှ နက်ပကျွန်းဂြိုဟ်ကို တွေ့ရှိလာကြလေသည်။ ထိုနက်ပကျွန်းဂြိုဟ်၏ ပြုပြင်ပေးမှုကြောင့် ယူရေးနပ်၏ လမ်းတွင် ထူးခြားချက် ရှိနေခြင်း ဖြစ်ပေသည်။ ယူရေးနပ်စ်ဂြိုဟ်၏ အချင်းမှာ မိုင်ပေါင်း ၃၂ဝဝဝ မျှ ရှိသည်ဟု ယုံကြည်ကြ၏။ တစ်နည်းဆိုလျှင် ကျွန်ုပ်တို့ နေထိုင်လျက်ရှိသော ကမ္ဘာ၏ အချင်းထက် လေးဆမျှပို၍ ကြီးလေသည်။ အချို့ နက္ခတ်ပညာရှင်များ ကမူ ထိုဂြိုဟ်၏အချင်းသည် မိုင်ပေါင်း ၂၈၅ဝဝ ရှိသည်ဟု ယုံကြည်ကြသည်။ ထိုဂြိုဟ်၏ ထုထည်သည် ကျွန်ုပ်တို့ ကမ္ဘာထက်အဆပေါင်း ၆၄ ဆမက ကြီးသည်။ ယင်း၏ ဒြဗ်ထုမှာ ကျွန်ုပ်တို့ ကမ္ဘာထက် ၁၄ ၁/၂ ဆမျှ ပို၍၊ သိပ်သည်းမှုတွင် ယင်းသည် ကမ္ဘာ၏ လေးချိုးတစ်ချိုးမျှသာ ရှိသည်။ ထိုဂြိုဟ်သည် ဓာတ်ငွေ့တစ်ဝက်တစ်ပျက်အခြေ၌သာ ရှိကောင်းရှိလိမ့်မည်ဟု သိပ္ပံပညာရှင်များက ယူဆကြလေသည်။
၂ဝဝ၅ ခုနှစ် ယူရေးနပ်စ်ဂြိုဟ်မှ ကွင်းများ၊ တောင်ဝင်ရိုးစွန်းခြမ်းတွင် တိမ်များကို မြင်နိုင်သည်။
ယူရေးနပ်စ်၌ လ၊ သို့မဟုတ် အရံဂြိုဟ် ၅ လုံးရှိသည်။ ထိုလများကို (၁) အေရီယမ်၊ (၂) အမ်ဗရီယယ်၊ (၃) တိုင်တန်းနီးယား၊ (၄) အိုဗရွန်နှင့် (၅) မီရန်ဒါဟု အမည် ပေးထားသည်။ နက္ခတ္တဗေဒပညာရှင်များက ခြောက်ခုမြောက် လတစ်လုံးပင် ရှိလိမ့်ဦးမည်ဟု ယူဆကြသည်။ ထိုအရန်ဂြိုဟ်ကလေးများသည် သေးငယ်လှသဖြင့် လွန်စွာ မိန်ကြသည်။ ယင်းတို့၏ လမ်းများမှာလည်း တစ်ခုနှင့်တစ်ခု နီးကပ်လျက် တည်ရှိနေကြသည်၊ ထိုအရန်ဂြိုဟ်များ၏ ထူးခြားချက်မှာ ယင်းတို့၏ ပြင်ညီသည် ယူရေးနပ်ဂြိုဟ်၏ ပြင်ညီတွင်၊ သို့မဟုတ် ပြင်ညီလောက်တွင် တည်ရှိမနေကြခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုသို့ ယူရေးနပ်၏ ပြင်ညီတွင်မရှိဘဲ ထိုပြင်ညီနှင့် မျဉ်းမတ်နီးနီးတွင် တည်ရှိနေကြသဖြင့် ထိုအရန်ဂြိုဟ်များသည် သွားလျက်ရှိသော ပြင်ညီများကို ကမ္ဘာမှ ကြည့်လျှင် တစ်ခါတစ်ရံတွင်မူ ပြားလိုက် မြင်ရလေသည်။ ထိုအရန်ဂြိုဟ်များ၏ လမ်းများသည် ၉၈ ဒီဂရီ မျှတွင် တည်ရှိကြသဖြင့် မျဉ်းမတ်ထက်ပင် ကျော်လွန်နေလေသည်။ ထိုကြောင့် ယူရေးနပ်၏ အရန်ဂြိုဟ်များသည် ယင်းတို့၏ လမ်းများကို သွားကြရာတွင် ပြောင်းပြန် သွားလျက်ရှိကြသည်ဟု ဆိုနိုင်သည်။
↑ ၂.၀ ၂.၁ ၂.၂ ၂.၃ ၂.၄ ၂.၅ ၂.၆ ၂.၇ Refers to the level of 1 bar atmospheric pressure.
↑ "Uranus". Oxford English Dictionary (2 ed.). 1989.
↑ The BBC Pronunciation Unit notes that /ˈjʊərənəs/ "is the preferred usage of astronomers": Olausson, Lena (2006). The Oxford BBC Guide to Pronunciation. Oxford, England: Oxford University Press, 404. ISBN 978-0-19-280710-6။
↑ ၃.၀ ၃.၁ ၃.၂ Munsell၊ Kirk (May 14, 2007)။ NASA: Solar System Exploration: Planets: Uranus: Facts & Figures။ NASA။ August 13, 2007 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၅.၀၀ ၅.၀၁ ၅.၀၂ ၅.၀၃ ၅.၀၄ ၅.၀၅ ၅.၀၆ ၅.၀၇ ၅.၀၈ ၅.၀၉ ၅.၁၀ Williams၊ Dr. David R. (January 31, 2005)။ Uranus Fact Sheet။ NASA။ August 10, 2007 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ The MeanPlane (Invariable plane) of the Solar System passing through the barycenter (April 3, 2009)။ April 10, 2009 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ (produced with Solex 10 written by Aldo Vitagliano; see also Invariable plane)
↑ ၈.၀ ၈.၁ ၈.၂ ၈.၃ ၈.၄ ၈.၅ ၈.၆ "Report of the IAU/IAG Working Group on cartographic coordinates and rotational elements: 2006" (2007). Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy 98 (3): 155–180. doi:10.1007/s10569-007-9072-y. Bibcode: 2007CeMDA..98..155S.
↑ "The masses of Uranus and its major satellites from Voyager tracking data and earth-based Uranian satellite data" (June 1992). The Astronomical Journal 103 (6): 2068–2078. doi:10.1086/116211. Bibcode: 1992AJ....103.2068J.
↑ "Comparative models of Uranus and Neptune" (December 1995). Planetary and Space Science 43 (12): 1517–1522. doi:10.1016/0032-0633(95)00061-5. Bibcode: 1995P&SS...43.1517P.
↑ ၁၁.၀ ၁၁.၁ Lunine, Jonathan I. (September 1993). "The Atmospheres of Uranus and Neptune". Annual Review of Astronomy and Astrophysics 31: 217–263. doi:10.1146/annurev.aa.31.090193.001245. Bibcode: 1993ARA&A..31..217L.
↑ Espenak, Fred (2005)။ Twelve Year Planetary Ephemeris: 1995–2006။ NASA။ 2007-06-26 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ June 14, 2007 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "The Atmosphere of Uranus: Results of Radio Occultation Measurements with Voyager 2" (December 30, 1987). Journal of Geophysical Research 92 (A13): 14,987–15,001. American Geophysical Union. doi:10.1029/JA092iA13p14987. ISSN 0148-0227. Bibcode: 1987JGR....9214987L.
↑ "The Helium Abundance of Uranus from Voyager Measurements" (1987). Journal of Geophysical Research 92 (A13): 15003–15010. doi:10.1029/JA092iA13p15003. Bibcode: 1987JGR....9215003C.
↑ "An Ultradeep Survey for Irregular Satellites of Uranus: Limits to Completeness" (2005). The Astronomical Journal 129: 518. doi:10.1086/426329. Bibcode: 2005AJ....129..518S.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ယူရေးနပ်စ်ဂြိုဟ်&oldid=406059" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၆ ဇွန် ၂၀၁၈၊ ၀၆:၄၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။